Golden Park | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 3.5 Decoration : 3.92 Service : 3.58
Opening Time - 6:00am to 2:00am (Open Now)
National Sports Complex, Pin Lon Road, North Dagon
Mon 6:00am to 2:00am
Tue 6:00am to 2:00am
Wed 6:00am to 2:00am
Thu 6:00am to 2:00am
Fri 6:00am to 2:00am
Sat 6:00am to 2:00am
Sun 6:00am to 2:00am
Activities on Golden Park
Htoo Htoo Aung uploadedaphoto at Golden Park3years ago
Ye Naung Kham reviewed Golden Park4years ago
Not very into food here...cox their Korean Seafood Noodle tastes nth different from the one I eat at home midnight. And abit expensive as it doesnt fill up my stomach. Lol. But I really love the spa sessions !!!!
Jųé Júë like Golden Park4years ago
Jųé Júë reviewed Golden Park4years ago
အစားအစာတွေဈေးနဲနဲကြီးတာကလွဲလို့ အဆင်ပြေပါတယ်.ခေါက်ဆွဲပြုတ်အတွက်ပေးတဲ့ side dishလေးတွေ စားလို့ကောင်းတယ်
mylann uploadedaphoto at Golden Park4years ago
Pop Corn reviewed Golden Park4years ago
Sauna သွားပြီးရင် ဝင်စားဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင်ပါ။ အကြိုက်ဆုံးကို ပြောပါဆိုရင် ကိုရီးယားက အာဂျီးမကြီးကိုယ်တိုင် အချဉ်စိမ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဥသေးသေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလကားပေးလို့လားမသိဘူး ခဏခဏတောင်းဖြစ်တယ်။ :P မှာစားခဲ့တာတွေကတော့ ဝက်ဆလပ် (အရသာကောင်း)၊ ဟင်းချိုတမျိုး (အရသာပေါ့)၊ ငါးဟင်းတစ်ပွဲ (စားမကောင်း) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းနည်းပြီး ဆိုင်မှာလူကျတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်စားပွဲထိုးခဲ့ရပါတယ်။ ရေသန့်လည်းကိုယ်တိုင်ထယူ၊ ထမင်းလည်း ကိုယ်တိုင်ထဆွဲနဲ့ စားခဲ့ရပါတယ်။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်လို့ အရသာကို ဒိထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။
Nwe Ei Phyo reviewed Golden Park4years ago
spa ကထွက်ပြီးတာနဲ့ ပြေးစားမိတာက ခေါက်ဆွဲပြုတ်။ စားလို့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် စားစရာတွေက ဈေးနဲနဲကြီးတယ်။ service ကသိပ်မကောင်းလို့ ပိုဂရုစိုက်စေချင်တယ်။
Naung Kham reviewed Golden Park4years ago
The spa services are pretty good and fairly nice decoration. I can say that this isagood place to relax, haha. Plus, it is very close from my place, so good then. Speaking of the food & restaurant, the waiters services are cool but foods are not that delicious and good la, like their Kimchi Noodle tastes like normal instant noodle.
Sweety reviewed Golden Park4years ago
ဒီဆိုင်ရဲ့ Bibimbap ရဲ့ taste ကတော့ Daebak. kimbap လည်း မိုက်တယ်. (y)
splash kitty (=^..^=)S reviewed Golden Park5years ago
minzin reviewed Golden Park5years ago
tznaing reviewed Golden Park5years ago
hunt2cm reviewed Golden Park5years ago
mylann uploadedaphoto at Golden Park5years ago
Writeareview for Golden Park
Report for Golden Park
Reserve table at Golden Park